lundi, 04 novembre 2019 08:45
Didier Ratsiraka: Mankalaza ny faha-83 taona nahaterahany
4 novambra 1936 - 4 novambra 2019 : feno 83 taona katroka anio ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Manamboninahitra mitondra ny galona «Amiral » grady ambony indrindra eo anivon’ny Tafika an-dranomasina izy. Filoha mpanorina antoko Arema i Didier Ratsiraka. Nitondra an’i Madagasikara teo anelanelan’ny 4 janoary 1976 hatramin’ny 27 martsa 1993. Niverina teo amin’ny fitondrana indray ny 9 febroary 1997 hatramin’ny 6 may 2002. Nirotsaka hofidiana filoham-pirenena indray ny taona 2018, ary nihintsana tamin’ny fihodinana voalohany. Tamin'ny fotoana nitondrany no nahazahoan'i Madagasikara, teo anivon'ny Firenena mikambana, ireo nosy malagasy izay mbola bodoan'i Frantsay hatramin'izao. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 04 novembre 2019 07:09
18ème Conférence Générale de l’ONUDI: Signature du premier “programme pays” pour Madagascar
Dans le cadre de la 18ème conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), Madagascar a signé son tout premier « programme pays », à hauteur de 35 millions de dollars. Ce qui marque ainsi le soutien de cette branche des Nations Unies au plan d'action pour rattraper le retard de développement de Madagascar à travers son industrialisation. Le Président Andry Rajoelina, était le principal orateur, et invité d'honneur, lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence générale ce 03 novembre 2019 à l’Emirates Palace Hôtel, Abu Dabi.
Nandefa taratasy amin’ny Filohan’ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao ny 30 oktobra 2019, mampahafantatra ny votoatin'ireo fihaonana in-droa miantaona notanterahin’ny loholona tamin’ny mponina avy amin’ireo Kaominina voakasiky ny fanatanterahana ny tetikasa Tanà-Masoando. Taratasy niarahana tamin’ireo Loholona avy amin’ny Faritanin’Antananarivo izy ity, mandravona ny votoatin’ny dinika tamin’ny nandalovan’ireo solontenan’ny mponina teo anivon’ny Antenimierandoholona, ny 29 oktobra 2019, sy ny fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka notanterahin’ny Loholona avy amin’ny Faritanin’Antananarivo, ny 21 oktobra 2019. Ny andininy faha 81 amin’ny Lalampanorenana no mamaritra ny anjara andraikitry ny Antenimierandoholona, dia ny fisolotena ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy. Anisan’ny fomba hanatanterahana izany ny fihaonana fakan-kevitra amin’ny vahoaka.
vendredi, 01 novembre 2019 17:28
Rina Randriamasinoro: « Maro ny programa sy asa apetrako ho fanamby fa mahavita zavatra ny tanora »
Mamaramparana ny « pré-campagne » ny kandida Ben’ny tanàna Rina Randriamasinoro. Nitety ireo Boriborintany enina teto an-drenivohitra, tao anatin’izay efatra herinandro izay. « Henoko daholo ny hetahetanareo, ny ahiahinareo, ireo fanavaozana tinareo hataoko rehefa lany Ben’ny tanan’Antananarivo ny tenako », hoy ity kandida narotsaky ny antoko Tiako i Madagasikara eto Antananarivo Renivohitra ity. « Tsarovy fa olon-tsotra toa anareo ny tenako, ary tsapako ny mahazo, ny manjo ary ny iainanareo. Ataoko toy ny ankohonako, ka ataoko vain-dohandraharaha ny fijerena akaiky ny asa takianareo amiko, tsy ho nenina na ho latsa no hoavinareo miaraka amiko, fa dia ataontsika miaraka, mandroso tokoa ny tanàna. Maro ny programa sy asa apetrako ho fanamby fa mahavita zavatra ny tanora », hoy i Rina Randriamasinoro. Fiombonam-bavaka amin’ny rehetra, izay hatao ao amin’ ny Kianja mitafo Mahamasina, no hanombohany ny fampielezan-kevitra ny marainan’ny talata 05 novambra 2019. (Jereo Sary Tohiny)
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra androany alarobia 30 oktobra ny didim-panjakana fanendrene an’i Jean-Louis Robinson ho Masoivohon’i Madagasikara miasa sy monina any amin’ny « République Populaire de Chine». Jean-Louis Robinson no ambasadaoro fahadimy notendren’izao fitondrana Rajoelina izao, taorian’ny 18 septambra 2019, nanendrena an’i Camille Vital atsy Maorisy, Beriziky Jean Omer any Bruxelles (Belzika), Rajohnson Olivier Hugues Rija any Frantsa ary Yvette Sylla eo anivon’ny Unesco Parisy. Dokotera i Jean-Louis Robinson ; efa filohan’ny Holafitry ny dokotera izy. Filohan’ny antoko AVANA (Vahoaka Aloha No Andrianina) i Jean Louis Robinson, mpikambana eo anivon’ny ARMADA, nanohana an’i Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2018. Ben’ny tanànan’Ampasikely, Kaominina ambanivohitra ao amin’ny Distrika Amparafaravola izy. Kandida tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2013, nitarika tamin’ny isam-bato 21,2 % tamin’ny fihodinana voalohany narahin’i Hery Rajaonarimampianina izay nahazo 15,8 %.
Tsy mahazo fitenenana amin’ireo haino aman-jery tsy miankina isan’ny be mpanaraka eto Mahajanga i Andriantomanga Mokhtar Salim. Nisy adihevitra tokony nifandaharan’ity farany tamina kandida amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna eto Mahajanga, tamin’io haino aman-jery io, saingy tsy tanteraka izany noho io sakana io. Araka ireo loharanom-baovao samihafa dia tsy nahafaly ny tompon’ireo haino aman-jery ireo ny tsy nahavitan’i Mokhtar nanome fahafaham-po ny fangatahany amin’ny hanesorana ireo olona nanao asa fanorenana ka manakona ny foto-drafitrasany sy taniny eny amin’ny Grand Pavois sy Jardin d’Amour.
Efatra tamin’ireo kandida Ben’ny tanàna miisa 6 275 neken'ny CENI amin’ireo Kaominina miisa 1 695 manerana an’i Madagasikara no namoy ny ainy, tsy mbola nanomboka akory ny fampielezan-kevitra. Avy ao amin’ny Distrikan’i: Toamasina II, Lalangina, Mampikony ary Ampanihy izy ireo. Misy kandida lohalisitra mpanolontsaina iray, avy ao amin’ny Distrikan’i Mananjary ihany koa namoy ny ainy. Miisa 4 902 ireo lisitra mpanolontsaina hifaninana amin’ny fifidianana hotaterahina amin’ny 27 novambra 2019.
Nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny marainan’ny alahady 27 oktobra 2019, tamin’ny 03ora30 ny fiaramanidina nitondra ny andiany voalohany amin'ireo taratasy sy fitaovana hampiasaina amin'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy Mpanolotsaina ny 27 novambra ho avy izao, toy ny valopy lehibe sy ny fitanana an-tsoratra ny latsabato, rehefa avy natonta tao Afrika Atsimo. Ny tetikasa SACEM (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar) niaraka tamin’ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana misahana ny fampandrosoana (PNUD), Vondrona Eorôpeana, Norvezy, USAID, Alemaina, Afrika Atsimo, Lafrantsa, Angletera, Korea Atsimo, Soisa ary Aostralia no namatsy vola ny fanontana printy, ny famonosana, ny fitaterana ireo fitaovana ireo tatsy Afrika Atsimo. (Jereo Sary Tohiny)
Hanatanteraka filankevi-pirenena ao amin’ny Live Hotel Andavamamba Antananarivo ny antoko UNDD (Union Nationale pour le Développement et la Démocratie) ny 30 sy 31 oktobra ho avy izao. Mandritra io fotoana io no hamaritan’ny antoko ny heviny sy ny toerana misy azy manoloana ny raharaham-pirenena. Antoko naorin’ny Pr Zafy Albert tamin’ny taona 1988 ny UNDD, tafiditra amin’ny fankalazany ny faha-30 taona nitsanganany ara-panjakana amin’ity taona 2019 ity ny fanatanterahana ity filankevi-pirenena ity. Dr Rakotovahiny Emmanuel ankehitriny no mitantana ny antoko, ary Pr Manoro Régis no Sekretera jeneraly.
Niavaka ny andron’ny sabotsy 26 oktobra ho an’i Rina Randriamasinoro. Fotoana io nampahafantarana sy nanoloran’ny antoko Tiako i Madagasikara azy tamin’ny mponina eny amin’ny Boriborintany niaraka tamin’ireo mpanolotsaina miaraka aminy. Anjaran’ny tao amin’ny Boriborintany fahadimy sy fahatelo io sabotsy 26 oktobra io, ka teo amin’ny Kianja Maitso Analamahitsy no nanolorana azy ho an’ny Boriborintany fahadimy, tao amin’ny Magro Behoririna kosa ho an’ny Boriborintany fahatelo.